Xog cusub oo laga helay Safar Qarsoodi ah oo uu DENI ku tegay Imaaraadka Carabta + UjeedkaIch | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xog cusub oo laga helay Safar Qarsoodi ah oo uu DENI ku...
Warar dheeraad ah ayaa laga helaya safarka uu madaxweynaha Maamulka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ku tegay wadanka Imaaraadka Carabta waxaana lagu wadaa inuu halkaasi kula kulmo mas’uuliyiinta u sarraysa Shirkadda DP World oo gacanta ku haysa Dekedda Boosaaso.
Siciid Deni Madaxweynaha Puntland ujeedka booqashadiisa ee isutagga imaaraadka carabta ayaa ah in uu kala hadlo shirkadda DP World heshiisyadii ay hore shirkadu ula gashay Maamulka Puntland gaar ahaan dhismaha dekeda Boosaaso.
Madaxweyne Deni oo safar ku tegay magaalada Dubai 15-kii April 2019 ayaa halkaasi kula kulmay Madaxa Shirkadda DP World Suldaan Axmed Bin Suleyman, iyagoo ka wadahadlay dardar gelinta dhismaha Dekedda.
Madaxweyne Deni oo maalmo ku sugnaa Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya, ayaa uga sii gudbay Imaaraadka Carabta.
Previous articleXog culus odowa iyo tiicey oo kursiga beesha saleman loolan adag ugu jira iyo lacago badan oo cadaado soo galay
Next articleGobolka Tigray ee Itoobiya oo soo saaray Go’aan ka dhan ah Dowladda RW Abiy